Myanmar Gays Heaven: Who Wana Suck My Dick? By Ko Min Min
Posted by Myanmar Gays Heaven at 3:40 AM
Anonymous May 7, 2013 at 9:42 AM
ကိုမင်းမင်း account ပေး add လိုက်မယ်။ အရမ်းကြိုက်တယ် ခင်းဗျား လီးကို။
ကိုမင်းမင်းဖုန်းနံပါတ်လိုချင်ပါတယ်l wanna suck his dick and drink his cum .
I want to suck your dick taste 👅 your cums
Anonymous May 7, 2013 at 11:21 AM
Anonymous July 18, 2014 at 12:20 PM
ဖင်﻿ခံ ချင်﻿ရင်﻿ ချ﻿ပေးမယ်﻿
Anonymous September 13, 2014 at 4:13 AM
အိုကေလေ RTar Pucci ကိုအပ်လိုက်ငါ့ညီလေးးးးးး
Rocky TMK September 23, 2015 at 8:49 PM
My cell no. 09420077597
Anonymous November 12, 2015 at 4:24 AM
going to pyi 0973018558
Lin Naung May 7, 2013 at 8:28 PM
very nice foto. love it. i also want to suck. how can i contact u? 421078823 is my number.
Royal Mail May 7, 2013 at 9:26 PM
U er mail pls
Anonymous May 8, 2013 at 7:04 AM
Anonymous February 20, 2014 at 3:47 AM
09250581420 မြောက်ဥကလာပါ ကိုနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ် စိတ်တိုင်းကျစေရမယ် မိန်းမမဆန်ရ
Anonymous December 13, 2014 at 11:44 PM
Anonymous May 17, 2013 at 1:05 PM
ပြည်သားလား ssailay1@gmail.com ကိုအပ်ပေးပါလာား
Anonymous July 18, 2014 at 12:27 PM
ssailay မင်းက ဖင်﻿ခံမှာလား
Anonymous May 20, 2013 at 7:50 AM
လူပျိူစစ်စစ်ပါကြိုက် ရင်acc အပ်ရန်moonstarboy.233
Dee De May 22, 2013 at 7:21 AM
ထားဝယ်​ကရှိလား ရှိရင်​ ​တွေ့ချင်​တယ်​။ sexysunflower00@gmail.com
Anonymous May 24, 2013 at 4:18 AM
မိတ္ထီလာကရှိကြလား ခံမယ်လူ ငါလိုးချင်လို့ မြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကဆိုပပိုအဆင်ပြေမယ် ငါကမြို့သစ်ကမို့
Anonymous August 9, 2013 at 8:56 PM
ခံပေးမယ်ပုသိမ်ကph ka 09422477277 contact now
ရှိတယ် gayမဟုတ်ဘူး acc or ph no ထားခဲ့ပေး htila
Anonymous April 21, 2014 at 10:07 PM
meiktila က ph no / name ထားခဲ.လေ။ဆက်သွယ်မယ်။
Anonymous June 15, 2013 at 7:35 PM
တို့ နာမည်က ကို မင်း လို့ ခေါ်ခေါ် ကို သန်းမင်းလို့ခေါ်ခေါ်ရပါတယ် ကန်တော်ကြီး အ ရှေ့ဘက် စည်ပင် တိုက်ခန်း မှာနေပါတယ်
တို့ က ရုပ် ရည်က လန်းပါတယ် တို့ က ဖင် အရမ်း ခံပါတယ် ဟိုတစ်နေ ည တွေက မိုးတွေက ရွာ နေ တော့ လူက မရဘူးလေ
အဲဒါ နဲ့ တို့ က ဖင် ခံ ချင်စိတ်က တားမရ ဆီးမရနဲ့ တညလုံး လိုလို ယားနေ တာပေါ့ ကံကောင်း ချင်တော့ မနက်စောစော ကန်တော်ကြီး အမဲသတ် ရုံ ကပြန်လာတဲ့ ကုလား နှစ်ယောက်ကို အချက်ပြပီး ဆွဲခံလိုက်တာ အားရပါးရ ရှိလိုက်တာ အဲလိုလုပ်လိုက်မှပဲ အာသာ ပြေသွားတော့တယ်
အဲဒိတော့ တို့ ပြော ချင် တာက တို့ က ဖင် အရမ်းခံ ပါတယ် တို့ ကို စိတ်ဝင် စားပီး လိုးချင်တယ် ဆိုရင်တော့
ကန်တော်ကြီး အ ရှေ့ဘက် တမ္ပဝတီ စည်ပင် တိုက်တန်း ကိုလာခဲ့ပါ
09 6811 595
Anonymous September 18, 2013 at 2:37 AM
ကျွန်တော့် ကိုလိုးသွားတဲ့ ကုလားတယောက်ရဲ့ဖုန်း နံပါတ်က ၀၉၄၀၂၇၀၉၄၄၇ ပါသူငယ်ချင်း
Anonymous October 15, 2013 at 12:42 PM
Apho Gyi June 16, 2013 at 11:18 PM
Anonymous July 20, 2013 at 5:31 PM
Add me alexandarthiha@gmail.com
Anonymous July 22, 2013 at 7:38 PM
Anonymous August 12, 2013 at 3:10 AM
ko zaw November 10, 2014 at 11:57 PM
Anonymous August 22, 2013 at 3:48 AM
ကျွန်တော်က ကျော်ကျော်...ရန်ကုန်ကပါ.နေတာက သန်လျှင်မှာပါ။အခုမှ ဒီဆိုဒ်ကို လေ့လာသူပါ.စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဖုန်းက ၀၉၄၂၀၃၁၂၂၀၄။အီးလ်မေးကတော့ kyawminhtun.hcd@gmail.com. အသက်က ၂၅. ရိုးလ်က ဗာ. စိတ်တူကိုယ်တူ ဖြစ်နိုင်မည့်သူကို တွေ့ချင်ပါတယ်ဗျာ။
Anonymous October 13, 2013 at 1:15 PM
စိတ်တူကိုယ်တူဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမယ့်ယောက်ကျားစစ်ပြီရုပ်ရည်ရှိရင်အဆင်ပြေ တယ်ကိုယ်ကဂုဏ်ရှိရှိနဲ့ထိန်း ပြီးနေနေတာရန်ကုန်သမိုင်းမှာနေတယ်အဆင်ပြေရင်ကိုယ့် တိုက်ခန်းမှာတွေ့လို့ရတယ် အသက်က25 ရှိတယ် အဆင် ပြေရင်ထာဝရပဲ လူတွေမသိ စေချင်ဘူး လူပျိုစစ်စစ်ပါ Ph ပေးခဲပါဆက်သွယ်မယ် ကျားမစစ်ရင်မလိုဘူး
Anonymous October 28, 2013 at 10:49 AM
Anonymous November 4, 2013 at 1:16 AM
snowdream.minmin230@gmail.com ကို အပ် ပေး ပါ ကျ နော် လဲ စိတ် တူ ကိုယ် တူ ရှာ နေ တာ ပါ အသက် က၂၄ ပါ ရုပ် လဲ အ သင့်အ တင့် ရှိ ပါ တယ် လုံး ဝ မ နွဲ့ ပါ နွဲ့ ရင် လဲ မကြိုက် ပါ
ဖိုးသား November 10, 2013 at 7:20 AM
mingalar092ပါ အတူတူပါပဲ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျ...
Anonymous February 19, 2015 at 1:51 AM
narvoogyi@gmail.ကျား၊မ မ​ရွေးပါ ကျားဆိုရင်​မနွဲ့ရဘူး အပ်​နိုင်​ပါတယ်​ သမိုင်းကပါ
ညီမ လေးက gayမဟုတ်ပါဘူး ညီမ လေး shemaleတွေနဲ့sexလုပ်ချင် တယ် shemaleဆို ဒီအ ကာင့်ကိုအပ်လိုက်ပါ sexygirl.sg15@gmail.com
gipsy bird August 13, 2015 at 10:50 PM
viber ph no788599120ကိုhiလိုက်ပါအကိုgmailကပို့တာမရလို့
Anonymous September 27, 2013 at 9:14 AM
anonymous ကိုယ်​ mdyကပါမင်းကိုဖင်​လိုးချင်​တယ်​ လက်​ခံတယ်​ဆိုရင်​ phoneနံပါတ်​​ပေးမယ်​
Anonymous March 20, 2014 at 12:49 PM
Anonymous October 2, 2013 at 8:25 AM
I am top only.You can add w.phoenix199@gmail.com
Anonymous October 3, 2013 at 3:59 AM
မော်လမြိုင် ဘက်က topရှိရင်
mmt.myomyat@ ကို add ပေးပါ
moe zatt September 10, 2014 at 11:34 AM
မလမက ​ဆေး​ကျောင်းသားပါ စိတ်​၀င်းစာတယ်​
Anonymous February 14, 2015 at 11:20 PM
မနွဲ့ပါ အိပ်ယာပေါ်ရောက်ရင်တော့မိန်းမလိုဝတ်ရတာကြိုက်ပါတယ် crazykoko68@gmail.com
gipsy bird June 6, 2015 at 8:17 PM
Anonymous June 18, 2015 at 7:02 PM
ဘယ်မြို့နယ်ကလဲ လီးကြီးအလိုးသန်တဲ့ သူနဲ့ တွေ့ချင်ပါတယ်
ဖုန်းနံပါတ် ထားခဲ့ပါ မနွဲပါ စိတ်တိုင်ကျ ဖြစ်စေရမယ်
Anonymous October 3, 2013 at 4:01 AM
မုံရွာက​ရောရှိလား ခံချင်​လို့ပါ မိန်းမပုံမ​ပေါက်​ပါ ရုပ်​ရည်​အသင့်​အတင့်​ရှိပါတယ်​ လိုးချင်​ရင်​ဖုန်းနံပါတ်​​လေး​ပေးခဲ့ပါ Or ဆိုင်​တဆိုင်​မှာချိန်းပါ
eoeokotajo @gmail.com ကိုအပ်လိုက်ပါ
Anonymous August 13, 2014 at 6:10 AM
yii goo October 3, 2013 at 9:46 PM
မန်း​လေး T စစ်​စစ်​များ ရှိလား T ​ပြောပြီး ​တွေ့လိုက်​ရင်​ gay ပုံ ​တွေ ပဲ ​တွေ့​နေရတယ်​ T စစ်​ ရှိရင်​ yiig95 ကိုအပ်​​ပေးပါ
မှတ်​ချက်​ ၃၀ ၃၅ ဝန်းကျင်​ မပိန်​ ရ
Anonymous October 12, 2013 at 1:37 AM
တကယ်လား၀၉၄၂၂၄၅၇၃၆၅ ကို massage or viber နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ
Aung Khant October 15, 2013 at 10:29 PM
တစ်ခါဆိုတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသေးပါဘူးကွာ.........ကျွန်တော်က gay လည်းမဟုတ်ဘူး.....but စမ်းကြည့် ချင်တယ် man to man ကို......ယောက်ကျားဆန်ပြီး လန်းတဲ့ သူနဲ့ လိုးကြည့် ချင်ပါတယ် gmail က romanceguy1995@gmail.com ပါ
Anonymous October 24, 2014 at 6:23 AM
Guy Next Door October 18, 2013 at 3:13 AM
mdy ကပါ guyanothernextdoor@ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ
Chit Yinpyaw October 19, 2013 at 2:18 AM
gipsy bird June 6, 2015 at 8:23 PM
gipsy bird June 7, 2015 at 12:16 AM
Chit Yinpyaw October 19, 2013 at 4:05 AM
Anonymous October 20, 2013 at 5:32 AM
Anonymous October 28, 2013 at 3:10 AM
august October 29, 2013 at 9:47 AM
ma p ta p October 29, 2013 at 9:54 AM
Anonymous November 25, 2013 at 1:19 AM
ma p ta p October 29, 2013 at 9:57 AM
Anonymous October 30, 2013 at 2:00 AM
လားရှိုးက မရှိဘူးလားဗျ ရှိရင် gtalk acc ထားခဲ့ပါ
Anonymous November 2, 2013 at 6:59 PM
Anonymous October 30, 2013 at 12:08 PM
ဟဲ့​ကောင်​မ ကိုသန်းမင်းနင်​ဒီ​လောက်​​စောက်​ရှက်​မရှိလီးငတ်​​နေတာလား ကုလား​တောင်​မှ​မ​ရှောင်​ဘူး အမျိုးဖျက်​တဲ့​ကောင်​ ​အေးဒီ​လောက်​စာ​နေရင်​ ငရုတ်​ကျဉ်​​ပွေ့နဲ့​မွေ​ပေးမယ်​ ​စောက်​ပါးစပ်​ပိတ်​ မန္တ​လေးသိက္ခာကျတယ်​ ​မေးလိုး မျိးမစစ်​​ကောင်​ မိမဆုံးမဖမဆုံးမ​ကောင်​လီးပဲ
Anonymous October 30, 2013 at 12:33 PM
မန္တ​လေးက ကိုသန်းမင်း ​ဖေလိုးမဒီ​လောက်​​စောက်​ပက်​ သို့မဟုတ်​ ဖင်​ရွ​နေလား နွားသတ်​တဲ့ ကုလား​တောင်​အလွတ်​မ​ပေးဘူး ​ဖေလိုးမ မွတ်​စလင်​ကိုဖင်​ခံတဲ့​ကောင်​မ အမျိုးဖျက်​မ ​သို့ ​ကောင်​ လီးပဲ ဒီ​လောက်​ရွ​နေရင်​လည်း ငရုပ်​ကျဉ်​​ပွေ့နဲ့ ​မွှေ​ပေးမယ်​ မန္တ​လေးမြို့သိက္ခာကျတယ်​
Anonymous November 1, 2013 at 9:59 AM
Anonymous November 5, 2013 at 8:31 PM
shweyoutlay.angel ကိုအက်ပေးကြပါ မိန်းကလေးအကောင့်မဟုတ်ပါဘူး နာမည်ကနေသူရိန်ပါ
မော်လမြိုင်ကပါ ဆက်သွယ်ပါလိုးချင်တယ်ခံချင်တယ်ဆက်သွယ်ပါ thuyamin012ပါ
Fredy but November 7, 2013 at 5:00 AM
0178887208 Malaysia, Wanna Suck Dick Contact to me anytime :) welcome
Anonymous November 9, 2013 at 7:50 AM
homo ရန်ကုန်က မိန်းမ မဆန်ပါဘူး northokkalapaက wailay180@gmail.com
gipsy bird June 6, 2015 at 8:26 PM
Anonymous November 10, 2013 at 9:49 AM
၇၃၂၃၄၁၃၁ မိန်းမဆန်ခြင်း အသက် ကြီးခြင်းသီးခံပါ ဟဲဟဲ
Anonymous November 14, 2013 at 7:05 AM
တို့ နာမည်ကသန်းမင်းပါ ကိုမင်းလို့ လည်းခေါ်ပါတယ် ကန်တော်ကြီးအရှေ့ဘက် တမ္မဝတီစည်ပင်တိုက်တန်းအောက်ထပ်မှာနေပါတယ် တို့ မိန်းမနာမည်က တီတီမာ ပါ တို့ ကသားတစ်ယောက်လည်းမွေးထားပါတယ် တစ်နေ့ ကိုနှစ်ခါ ဖင်မခံရင်မနေနိုင်ပါဘူး ၁၉လမ်းထောင့် ကော်ပျံ့ ကြော်ဆိုင်သွားသွားပီးလည်းဖင်ခံပါတယ်
Anonymous November 20, 2013 at 11:52 AM
M တို့ နာမည်ကသန်းမင်းပါ ကိုမင်းလို့ လည်းခေါ်ပါတယ် ကန်တော်ကြီးအေရှ့ဘက် တမ္မဝတီစည်ပတင်ိုက်တန်းအောက်ထပ်မှာနေပါတ ယ် တို့ မိန်းမနာမည်က တီတီမာ ပါ တို့ ကသားတစ်ယောက်လည်းမွေးထားပါတယ် တစ်နေ့ ကိုနှစ်ခါ ဖမင်ခံရမေင်နနိုပင်ါဘူး ၁၉လမ်းထောင့် ကော်ပျံ့ ကြော်ဆိုသင်ွားသွားပီးလည်းဖခင်ံပါတယ် Reply
Anonymous November 23, 2013 at 1:02 AM
Anonymous December 20, 2013 at 1:49 AM
ပြည်ကမရှိဘူးလား bottom ပါ
Anonymous September 13, 2014 at 4:16 AM
ok i am top နေတာက ဘုရားကြီးမှာနေတယ်
ကွန်ပျူတာဒုတိယနှစ် RTar Pucci ကိုအပ်လိုက်ပါဗျ
Anonymous September 13, 2014 at 4:25 AM
Pyay ka ပါ RTar Pucci အပ်လိုပ်
Anonymous February 1, 2014 at 7:51 PM
Yangon က ,ပါ sex လုပချင်တယ် ချစ်သူလိုချင်တယ် , မနွဲ့ရ
ကျွန်နော် က bot ပေမယ့် လုံးဝမနွဲ့ဘူး
ကျားဆန်တဲ့လူနဲ့သာချစ်ချင်တယ် , အသက်က၂၃ ပါ , အဆင်ပြေရင်
kaunglay88.kl84@gmail.com ကို add လိုက်ပါ
gipsy bird June 7, 2015 at 12:22 AM
kaunghtet zaw February 1, 2014 at 9:01 PM
I am notagay ..I am reallyaman But I try to do fucking withaman ...I wanna meet withaman fucking me....so connect me ..my email is kyalzinlay.1500@gmail.com...please reply me ...wait foraman fucking with me............LOVE FOREVER :)
Lin Naung February 4, 2014 at 3:50 PM
I m bottom only from ygn. 4210-8823 is mine.
Than Zaw July 6, 2017 at 9:20 AM
thet paing February 9, 2014 at 6:44 AM
i wanna suckaguy's penis ....It is really ..I live in သာကေတ၊ ထူပါရုံလမ်း၊ ပန်းတိုင်ကျူရှင်နဲ့ကပ်ရပ် from yangon .....I wanna suckaguy's penis really so much....I wait there I live ...please come to me and feed me your cock's taste.......I am waiting.........Kiss u and ur penis........from my mind ...later I had to kiss ur penis...
Than Zaw July 6, 2017 at 9:21 AM
Can meet this week? 423561221
Kyaw Oo March 2, 2014 at 9:08 AM
I'm from yangon.And I haven't no experience in sex.l needatop or straight with handsome cool appearance.Such men add polarbee111@gmail.com.
kaunghtet zaw March 9, 2014 at 11:09 PM
ko kyaw oo , please contact me I wanna meet u ...my account is kyalzinlay.1500.
Anonymous March 27, 2014 at 3:43 AM
​တောင်​ဥက္ကလာ ကမနွဲ့တဲ့homo​တွေရှိလားဗျ 69ဆွဲချင်​တယ်​ နွဲ့တာဆို မဆက်​သွယ်​နဲ့ ကျွန်​​နော်​က၂၃ မနွဲ့ဘူး
tun min aung May 26, 2014 at 1:33 PM
Anonymous June 16, 2014 at 9:32 PM
mdy ကပါ။welcome ပါ။ 0943014186 ပါ။
Anonymous October 12, 2014 at 10:01 PM
Prince Shine October 16, 2014 at 2:06 AM
Peter König October 26, 2014 at 8:12 PM
Prince Shine June 20, 2015 at 3:24 PM
Hi Peter, do you use Viber or Skype? What are you looking for?
​ဝေလင်း October 30, 2014 at 1:17 AM
​ဝေလင်း လို့​ခေါ်ပါတယ်​ boyfriend တ​ယောက်​​လောက်​လိုချင်​ပါတယ်​ viber မှခင်​လို့ရပါတယ်​သူငယ်​ချင်းတို့ ဖုန်းနံပါတ်​က​တော့ ၀၉၉၇၂၃၇၆၆၇၆ ပါ
Anonymous November 7, 2014 at 1:50 AM
It would be an honor to worship that monster! william.blake41@yahoo.com
royallover22 December 28, 2014 at 6:46 AM
Somebody can you help me?
royallover22 December 28, 2014 at 6:47 AM
royallover22 December 28, 2014 at 6:49 AM
Tgi ka phin khan me' thu chi lar
royallover22 December 28, 2014 at 6:55 AM
Min Min ko loe chin tal
jj December 7, 2016 at 1:58 AM
Brandi February 18, 2015 at 11:57 PM
Thin, white sissy bottom here. brandi.lilly@yahoo.com
jj December 7, 2016 at 2:02 AM
Kar Yan Lin Htet January 31, 2015 at 10:36 PM
ရန်ကုန်မှာနေပါတယ် အကောက်ကတော့ heroboy399@gmail.com 09250678707
Name Kar yan Lin Htet
Iron Dragon February 9, 2015 at 11:37 AM
ygn role ka bot0936073294
Brandi Lilly February 18, 2015 at 11:56 PM
I'd suck that cock all day.
White sissy bottom here. brandi.lilly@yahoo.com.
bright star March 2, 2015 at 12:43 AM
bright star March 2, 2015 at 12:47 AM
Joey danial March 14, 2015 at 12:01 PM
Ph no. Payy own lay
nyiko March 21, 2015 at 10:19 AM
Anonymous March 23, 2015 at 8:12 AM
အ ကို.... ဖြိုး က အခြောက် မဟုတ် ပါ.... ပါကင် အစစ် ပါ အတွေ့ကြုံ မရှိပါဘူး... ပါကင် အဖွင့်ခံချင်ပါတယ်....ရေ ရှည်ဆက်ဆံချင်ပါတယ်... အတည်တကျတယောက်တည်းနဲ့ပဲ ဆက်ဆံချင်ပါတယ်...စိတ်ဝင်စားရင် မိတ်ဆွေ ဖြစ်ချင်ပါတယ်...အဆင်ပြေနိုင်မယ့်သူဆို အချက်လက်ဆက်ပို့ပေးပါ့ မယ်...beautyphyoxxx@gmail.com
gipsy bird June 5, 2015 at 7:01 AM
Anonymous April 8, 2015 at 1:11 AM
လီးကြီးတယ်ရန်ကုန်ကပါ top ပါ topမိတ်ဆွေ
လိုချင်တယ် 092000874က်ုခေါ်ပါ မိန်းမဆန်ရင်
Anonymous April 8, 2015 at 1:40 AM
sorry per 09792000874ပါ
Ye Lin May 8, 2015 at 3:24 AM
gipsy bird June 6, 2015 at 8:07 PM
Rot Chann June 13, 2015 at 8:37 AM
gipsy bird June 20, 2015 at 2:50 AM
Naing Tun June 27, 2015 at 10:16 PM
Anonymous August 14, 2015 at 9:09 PM
လီးကြီးတယ် ကျားစစ်နဲ့ပဲတွေ့ချင်တယ် တလှည့်ဆီလိုးပီး လီးစုပ်ချင်တယ်viber 09791798400
min khant moe October 1, 2015 at 8:16 AM
Toe Lay HM October 6, 2015 at 9:37 AM
မိုးကုတ်​က ဖင်​လိုး ဖင်​ခံ မယ့်​သူ​တွေရှိလား..
မိန်းမ ဆန်​ရင်​ လုံးဝမကြိုက်​ပါ... ကိုယ်​ လဲ ​ယောင်္ကျား စစ်​စစ်​လိုပဲ​နေတယ်​ ​ယောင်္ကျား စစ်​စစ်​ပုံစံနဲ့ ကိုပဲ ဖင်​လိုးချင်​တယ်​... ဖင်​ခံချင်​ရင်​လည်း လိုး​ပေးပါမယ်​ ​ဂေါ် လီ နှစ်​လုံးပါပါတယ်​.. စိတ်​ဝင်​စားရင်​
toelaytoelayhm@gmail.com ကို အချိန်​မ​ရွေး ဆက်​သွယ်​လိုက်​ပါ... ချိန်းပြီး လိုးကြမယ်​ ...
like cock December 28, 2015 at 11:13 AM
Any 1 for fuck me now?
like cock December 28, 2015 at 11:15 AM
Near shwe gone daine..
Anonymous April 6, 2016 at 9:07 PM
Looking for male massage 0925344357
Moe Sat June 26, 2016 at 5:32 AM
Moe Sat June 26, 2016 at 5:33 AM
kyalsin moe July 28, 2016 at 1:19 AM
ဖင်ခံချင်ပါတယ် တခါမှ မခံဖူးပါဘူး ခံရမှာ နဲနဲတော့ကြောက်ပါတယ်
ဖင်ခံရတဲ့ အရသာလည်း သိချင်ပါပါတယ် ပြောပြပေးကြပါဦး
Anonymous December 12, 2016 at 6:01 AM
Video Collection 13
Video Collection 12
Video Collection 11
Video Collection 10 (ဒါ ဘယ်သူလဲတော့ သိမှာပေါ့)
Video Collection 9
Video Collection 8 (Korean Cute Boy)
Video Collection 7
Video Collection 6
Video Collection 5
Mdy သင်္ကြန်မှာ Nge တေဇနဲ့ တူတူ အမုန်းကဲရအောင် ဗျာ ....
အာသာဖြေခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှန်၊ အမှား သိကြစေဖို့ - *ရေးသားသူ* Arkar Hein *ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ *Dr. Thurein Hlaing Win. အာသာဖြေခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန် လုပ်လေ့ရှိတတ်ကြတ...
Yangon Boy လေးပါတဲ့................
21, 5'6'', 129lbs, handsome, Pure Top Only, Taunggyi, Now in Yangon.. Contact kaungzaw92@gmail.com if interest...
စစ်ကိုင်း သူငယ်ချင်းတွေလိုချင်လိုပါ သူငယ်ချင်းကူညီပါကွာ m2boyman@gmail.com စစ်ကိုင်းက homo များအပ်ပေးပါ
Thiha ..age 21 , mdy
ဒီကောင်လေး နာမည်ကတော့ သီဟပါတဲ့ဗျာ...မန်းလေးကပါ
KM ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလေးပါ